Muraayadaha kuxiran haanta birta ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa kaydinta cuntada iyo cabitaanka biyaha, daaweynta bullaacadaha, injineernimada dhirta, kaydinta digirta qalalan, batroolka iyo warshadaha kale.
Intooda badan waxaa loo isticmaalaa beero yaryar (qiyaastii 10000-20000 xoolo) iyo wax soo saar madaxbanaan oo ay maamusho shirkado wax soosaara.
Shirkadaha beeraha iyo beeralleyda, Separation CSTR ayaa ah doorashada ugu fiican, oo leh faa'iidooyinka iyo fududeynta hawlgalka.
Waxaa lagu dabaqaa dhirta waaweyn ee wax soo saarka dhirta noolaha ah ee u baahan in lagu maareeyo gobollo kala duwan ama si gooni gooni ah, waana ay awood u leedahay daaweynta qashinka dhexe iyo takhasus gaar ah leh.
Waa la habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, cabirka haanta, midabka, heerka seismiga, iwm.
Isticmaal kala duwan, haanta taangiga sidoo kale way ka duwan tahay, waxaan ku salayn karnaa baahida macaamiisha, taangiga loo habeeyay. Shirkaddayadu waxay leedahay awood ay wax kaga qabato baahiyahaaga oo dhan.
Taangiyo leh naqshad taangiyadeed, wax ku ool ah iyo keydinta booska, oo badanaa loo isticmaalo daaweynta bullaacadda waraabka, iwm.
Haanta keydka gaaska
Waxaa badanaa loo isticmaalaa qalabka leh isbeddelo waaweyn ee alaabta ceeriin. Fadlan nala soo xiriir haddii aad qabto wax shuruudo ah.
Haanta keydka biyaha
GFS TANK waxay bixisaa biyo / dareere wanaagsan oo biyo ah meelo gaar ah (aagagga buuraha, jasiiradaha, meelaha cidlada ah) .Maxay taasi tahay? 1. Faa'iidooyinka gaadiidka - Taangiyada GFS ayaa runtii laga soo uruuriyay taarikada dhaldhalaalka ah ee birta dhaldhalaalka ah. Maheynin taangiga oo dhan halkaas, waxaan helnay saxan bir ah. 2. Faa'iidada dhismaha - marka taarikada birta ay goobta timaado, waxaa lagu isugu soo ururin karaa xirmooyin, si fudud ayaa loo goyn karaa waqti gaaban. Looma baahna xirfadlayaasha, uma baahna isleeg qiimaha sare ...
BSL GFS tank sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa haanta biyaha dab-damiska, oo lagu soo ururiyo aagga wershadaha, aagga la degan yahay iyo dhismayaasha dhaadheer. Way fududahay in la abaabulo oo uu yeesho nolol adeeg oo cimri dheer. Tilmaamaha rakibaadda haanta biyaha dab-damiska: 1. Dhulku waa inuu fidsan yahay, dhulku waa inuu lahaan karaa culeyska guud ee jirka munaaradda biyaha ka dib markii ay ka buuxdo dareere, iyo dhulku waa inuu ahaadaa mid ka madhan waxyaabo fiiqan. 2, 5 tan iyo wixii ka hooseeya (oo ay ku jiraan 5 tan) alaabada uma baahna feejignaan badan, sheyga ca ...
Biyo la cabbo
Codsiga haanta kaydinta biyaha waxaa lagu dabaqmaa kaydinta biyaha roobka iyo keydinta kadib quusitaanka. Waqtiga rakibku waa gaaban yahay, tayada tayada iyo midabka biyaha keydinta waa la hagaajin karaa, taas oo ku habboon shuruudaha garoonka. Si loo hubiyo nabadgelyada biyaha la cabo, waa inaan doorannaa kuwa aan sun ahayn, aan dhib lahayn, aamin aamin ah oo aamin ah oo haanta kaydinta biyaha .Maalinta biyaha la qaadi karo ee la cuni karo ma buuxin karto heerka badbaadinta biyaha la cabi karo, sababtoo ah mugga weyn .. .
Taangiga GFS waxaa si weyn loogu isticmaalaa kaydinta biyaha warshadaha. Waxay qaadi kartaa biyo badan ama dareere badan, sida brine, biyo nadiif ah, biyo sifeyn ah, biyo cusbo ah, biyo jilicsan, biyo nadiif ah, biyo nadiifa iyo biyo saafi ah. Taangiyada GFS ee ay soo saarto shirkadeena waxaa laga soo ururiyay bir qaas ah oo bir bir bir ah, alaabo khaas ah oo lagu xiro, xirmooyinka is-xiridda iyo agabyo kale, oo leh adeeg adeegga in kabadan 30 sano. Ka dib markii la iscafiyo, saxannada birta ee aluminiumka qaaska ahi waa c ...